मृत्युको वृत्तचित्र! - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
मृत्युको वृत्तचित्र by Pravin | Saturdayकलम | Kavyalaya
Background Image Source:- Reuters
by प्रवीण June 29, 2019
यो दुनियाँ साच्चै नै रहस्यमय छ। तिलस्मी छ। मायाबी छ। लाग्दैन तपाईँलाई? मलाई त लाग्छ- अत्ति नै आश्चर्यजनक लाग्छ। अचम्मको लाग्छ। अनौठो लाग्छ। अझै पनि पुर्णरुपले यो संसारलाई कसैले बुझेको छैन। र कसैले बुझ्नेवाला पनि छैन। यो पुरै ब्रह्माण्ड नै अबुझ चिजहरुको/कुराहरुको संग्राहलय हो। यसको उत्पति नै एउटा रहस्य हो। के विज्ञानले पनि ठोकुवा दिएर भन्न सक्छ र- यो दुनियाँ सासाना कणहरु मिलेर बनेको हो? प्रश्न आयो यहाँ। प्रश्न पनि त एउटा भयङ्कर रहस्य हो- प्रश्नवाचक चिन्ह जस्तै। यो संसार पनि प्रश्नैप्रश्नको रहस्यमय चिहानघारी हो। होइन त?
यो संसारमा कति प्रश्नहरू छन्- अनुत्तरित/अल्झिएका/बल्झिएका/नसुल्झिएका। कति प्रश्नहरु यसै/त्यसै प्रश्नहरुमा मात्रै सिमित छन्- उत्तरहरुको पर्खाईमा/वियोगमा/शोकमा। जस्तो कि, मान्छे किन जन्मियो? अनि मान्छे किन मर्छ? कसरी जन्मियो/जन्मन्छ त, भनिराख्नु पर्दैन तर केका लागि जन्मियो? सिर्फ बाँच्नका लागि? अनि मर्न? मृत्यु? के हो मृत्यु? अनि किन हो? मर्नै छ भने किन जन्मनु? यस्ता कयौँ प्रश्नहरु –जसका कुनै निश्चित उत्तर छैनन्, अझै पनि ती घुमिरहेछन्/नाचिरहेछन्- तारामण्डलहरूमा/मान्छेका मानसपटलहरूमा/प्रयोगशालाहरूमा।
मान्छे किन मर्छ? मरेपछि के हुन्छ? कहाँ जान्छ? (यति खेर म बुद्धिसागरको दामी कविता “मरेको मान्छे” लाई खुब सम्झिरहेको छु। तपाईले पनि यो कविता पढ्नु भएको छैन भने, खोजेर/किनेर पढ्नुस् एकपटक – गजबको छ, तपाईलाई पक्का तान्छ/मन पर्छ। भनौं न, यो लेख यो कविताबाट पनि धेर/थोर प्रभावित भएको हो ।) मान्छे मरेपछि सकियो? कि अझै पनि उसको अस्तित्व रहन्छ? तपाईको मगजमा घुमिसक्यो होला मैले उल्लेख गर्न लागिरहेको कुरा- ‘आत्मा’। हो आत्मा भन्ने कुराको कुनै अस्तित्व छ कि छैन? १९०७ मा ड्युकन म्याग्डगल (Ducan MacDaugall)ले एउटा वैज्ञानिक परिक्षण मार्फत के पत्ता लगाए भने, मान्छे मर्नसाथै उसको शरिरको वजन २१.३ ग्रामले घट्छ, आखिर त्यो तौल के को हो? विज्ञान पनि यसमा अझै अनुत्तरित/दोधारमा छ!
आर्यघाटतिर म धेरै डुल्छु/घुम्छु। त्यो पशुपतिको डाँडाको बेन्चमा बसेर मान्छे जलाएको/पोलेको हेर्छु। खुब एकोहोरो बनाउने दृश्य लाग्छ मलाई। त्यो दृश्य, हृदयविदारक हो या आनन्दमय- म सधैं दुविधामा पर्छु। त्यो रुवाबासीको आवाजले मेरा कानका पर्दा समेत भावुक बनाउछन्! तर एकछिन पछि सोच्छु, मर्नु त सबैलाई छ! यो मात्रै हो र? म पनि मर्छु? वरिपरि हेर्छु, यी सबै मर्छन्। धन्न सृष्टिले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन।
लास चित्तामा चढाइन्छ। दागबत्ती दिइन्छ। धुवाँ पुत्पुताउन थाल्छ। शव बिस्तारै सबै जल्दै जान्छ। खरानी बन्छ। धुवाँ बन्छ। एउटा बुढो ३ फिट लामो बाँस बोकेर आउँछ र त्यो जलिरहेको/पग्लिरहेको लासलाई घचेट्न धाल्छ। मेरो आङ् सिरिङ्ग हुन्छ। धड्कन एक्कासी बढ्न थाल्छ।
कस्तो है? के मान्छे मरेपछि उसले गर्ने महशुस पनि मर्छ? त्यो आगोले जल्दैन होला र? पोल्दैन होला र? पीडा हुदैन र – मरेपछि? दुख्दैन र? आँसु झर्दैन र? गाड्दा पनि त – निसासिन्छ होला। यो सब हुन्छ होला– तर कसैले देख्दैन होला।
जिउदाहरुसँग त्यो शक्ति नै छैन होलाः मरेको मान्छेको पीडा/हाँसो/आँसु/खुशी – हेर्न/देख्ने/महशुस गर्ने? यस्तो हुन सक्दैन र? किन हुन सक्दैन? कसले देखेको छ र? त्यसैले चान्स ५०/५० % छ। भने त, यो संसार रहस्यमय छ- यहाँ सम्भव पनि असम्भव बनिदिन्छ र असम्भव पनि सम्भव भइदिन्छ?
यस्तो पनि त हुन सक्ला हामी यहाँ जन्मेको/बाँचिरहेको भनेको कुनै अर्को लोक/ठाउँ बाट मरेर आएको हो। या हामी मरेपछि सायद अर्कै लोकमा, अर्कै रुपमा जन्मछौ? यो पनि त हुन सक्छ? हामी मरेर फेरि यही जन्मिन्छौ, अर्कै रुपमा मान्छे भएर वा अर्कै जीव भएर! यी बाँचिरहेका मान्छेहरुको आफ्नो मृत्यु/मरण प्रति विभिन्न थेउरी/सिद्धान्तहरु छन्। पुर्णजन्म , स्वर्ग/नर्क, भ्रम/भान्ति, शुन्यता- यस्ता फरक फरक सिद्धान्तहरु जो मृत्युपछि हुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्। के तपाई मान्नुहुन्छ, यो हो कि होइन? मा बाँचिरहेको मृत्युको एब्स्ट्रयाक्ट वृत्तचित्रलाई?
मान्छे मरेपछि फेरि पनि जन्मछ – पुनर्जन्म! मान्छे नै भएर या जनावर/चराहरु भएर। तर धर्मशास्त्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने,”मान्छे मरेपछि फेरि अर्को मान्छेकै जुनी लिन ८४,००,००० जन्म लिएर आउनु पर्छ!” बाफ्रे! ८४,००,००० मा के के पर्छन्? जनावर,माछा, चरा, रुख, ढुंगा, काठ…. सबथोक! सबथोक बनेर/भएर आउनु पर्छ, सब चिज भोगेर आउनु पर्छ? जान्न/गर्दिन/घुम्दिन भन्न पाइन्छ होला कि नाईँ?
स्वर्ग र नर्क धेरैले विश्वास गर्ने मृत- सिद्धान्त हो। तपाईलाई/मलाई/हामीलाई/प्रायलाई विश्वास छ कि- स्वर्ग र नर्क भन्ने ठाउँ छ- जहाँ हामी मरेपछि पुग्छौ। स्वर्ग- जहाँ भगवान् बस्छन्, जो सुन्दर/शान्त/निश्चल/पवित्र छ। यहाँ जानलाई हरेक मान्छेले धर्तीमा पुण्य गरेको हुनुपर्दछ- क्या सहि नियम छ है? नर्क- जहाँ दत्य/राक्षस बस्छन्, जो अँध्यारो/कालो/डरलाग्दो/कुरुप छ। यहाँ कोहि जान चाँहदैनन्- तर जसले धर्तीमा पाप गरेको छ त्यसको लागि यो सजाय दिने कारागार/अदालत हो। सानोमा हजुरमुमाले भनेको सम्झन्छु-‘त्यहाँ त बडेमानका दानवहरू हुन्छन्, जसले पापीहरुलाई ताँतो तेलमा डुबाउछन्!’ मेरो आङ सिरिङ्ग हुन्छ। म सोच्छु, “मैले आजसम्म पाप बढी गरेको छु कि पुण्य?”
भ्रम! यो सब भ्रम हो। बाँच्नु भ्रम हो। विज्ञानमा ‘क्वान्टम पिजिक्स र बायिसेन्टिजम’ भन्ने के हुन्छ रे? त्यसको आधारमा यो हामी बाँचिरहेको सब भ्रम हो। यो संसार अस्तित्वमा रहनु नै हाम्रो दिमागको भ्रमित खेल मात्र हो। एउटा झुठ मात्र हो। यो गाडी, घर, पैसा, सम्बन्ध – सब भ्रम! बाँच्नु नै सत्य होइन। यो हाम्रो चेतनाको कल्पना मात्र हो! आइन्सटाइनले पनि मानेको थेउरी रे यो चाहिँ- गुगलले भनेको है मलाई चै। म आफै त कहाँ जान्दछु र यस्ता कुरा? उनले सापेक्षता वाला सिद्धान्त (theory of relativity)मा पनि भनेका छन्; “ ठाउँ र समय वास्तवमा पर्यवेक्षक (observer) को सम्बन्ध हो”। यदि दुनियाँ पर्यवेक्षकको रचना हो भने, यो हाम्रो मरण सँगै बिनाश पनि त हुनसक्छ! झ्याऊ लाग्यो है? यस्तै हुन् यी वैज्ञानिक थेउरीहरु? तर किन किन? मलाई नि कहि/कतै हो कि? हो कि? जस्तो लाग्छ।
शुन्यता। खाली। रित्तोपन। केही छैन। मरेपछि केहि हुन्न? कोहि हुन्न। मरियो, सकियो। बिरामी भयो, सास फेर्न छोड्यो, मान्छे मर्यो, सकियो। कोहि फर्केर आउने वाला छैन। यो एउटा सिद्धान्त छ- जसलाई म ८९% मान्छु/विश्वास गर्छु, तपाई कुन थेउरीलाई मान्नु हुन्छ बे?
मृत्यु/मरण/लास/चिता – झ्याऊ लागिसक्यो होला है?- कति बकबक गर्छ यो भनेर। दिक्क पनि त लागिसक्यो होला? ह्या, छोड्नुहोस् यो मृत्युको बकवास गफ। मरेपछि के हुन्छ न तपाईलाई थाहा छ, न मलाई। आ….. जे सुकैहोस्, खल्लीबल्ली! बरु, सुन्नुस् न, यदि मरेपछि पनि यो संयोग भन्ने कुराको अस्तित्व रहन्छ भने- हाम्रो भेट पनि त पक्कै होला। भेटौंला। हात मिलाउला। अँगालो मारौँला। अनि मृत्युलोकको कुनै भट्टी पसलमा पसेर दारू घुड्काउला या कुनै कुनाको एकान्त कफीसपमा बसेर कफि सुर्पाउँला। बात मारौला/गफ गरौला– बाँचेर आएको जिन्दगीको अनि त्यो मरेको/मरिरहेको मृत्युको! त्यतिन्जेल सम्म चै मज्जाले बाँच्नुस्/सास फेर्नुस्/मस्ती गर्नुस्। ल त, सास फेरिरहेका जीवात्माहरू, सी यु आफ्टर देथ !
Image Source: Star Death Painting by Polina Azimova
प्रयोगशालामा छट्पटाएका प्रश्नहरू
खै, कसरी सम्झाउँ तिमीलाई